Wararka Maanta: Jimco, Sept 7 , 2012-Danjire Augustine Mahiga oo Xidhibaannada Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya kula taliyay inay doortaan Hoggaamiye Aragti fog
Danjire Mahiga, wuxuu ku tilmaamay baarlamaanka hadda jira inuu yahay kii ugu aqoonta badnaa ee matala shacabka oo abid soo mara taariikhda Soomaaliya, isagoo xusay inay ogaadaan xildhibaannadu inay yihiin hay’add lagu aamay ayaaha dalkooda.
Isagoo ka hadlayay diyaar-garowga doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliyeed ayaa wuxuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ay indho gaar ah ku eegayaan maalmaya yar ee harsan iyagoo qaba rajo iyo hami weyn, waana inaad kasoo dhalaashaan hamigaas.
"Murashaxiintu madaxweynaha waxay idiin soo bandhigi doonaan qorshayaashooda siyaasadeed, dhageysta oo xulashadiina ku saleeya sida ay u kala wanaagsan yihiin," ayuu yiri Mahiga, "Run iyo been waxaa maalin uun kala caddaan doona wararka sheegaya in musuqmaasuq iyo laaluush bixin ay jiraan si la isugu dayo in codadka la iibsado."
"Codadka la dhiibanayo waa sir mana ogaanayo qof dhiibanaya codkiida iyo alle awoodda leh ee uumay lama ogaan karo qofka aad codkaada siisay – laguma ogaan doono mana dhici doonto in la idinka aar guto," ayuu Mahiga ku yiri warqaddiisa furan.
Augustine Mahiga wuxuu xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday inay ka fikiraan codkooda iyagoo ka fikiraya wanaagga dalkooda, sidoo kalena wuxuu kula taliyay inay ogaadaan inuusan saarnayn waajib aan ahayn kan dal.
"Dooro murashaxa noqon doona daacad kana soo bixi kara hoggaaminta dalka ee leh argti fog oo ku habboon afarta soo socota ee dhismaha iyo isbedelka nabadda Soomaaliya," ayuu yiri Danjire Mahiga oo la dardaarmayay xildhibaannada baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn, ergaygu wuxuu kusoo gabagabeeyay warqaddiisa furan: "Sharaftiina iyo fursaddiinna waxay ku jiraan cod dhiibashada qarsoodiga ah, ha ogolaan in fursaddan ay siibato 10-ka bishan September ee soo socota."
Hadalka danjire Mahiga ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo ay Muqdisho ka socdaan ololayaal fara badan oo murashax walba u ku doonayo inuu ku kasbado xildhibaannada baarlamaanka si ay isaga codka u siiyaan uuna ugu guuleysto hoggaaminta Soomaaliya afarta sano ee soo socota.